Nezvedu - YIXIAN LONGSHAN Dombo ZVINODZIDZISWA CO., LTD
Rakasununguka / Random Dombo
Dombo reLongshan rakagadzwa muna1988, iine guta rakanyoreswa re10millon yuan Inowanikwa muYixian, Baoding City, Hebei kuChina Kuitira kuti longshan ive mubatanidzwa wemazuva ano nekugadzirisa, kugadzira, kutengesa nekushumira.
Iyo fekitori ine yemazuva ano yekugadzira musangano, epamberi ekugadzira michina, akakwana mashandiro ekushandira, epagore kugadzirwa kwechisikigo slate 500,000 mativi metres, zviuru makumi maviri zvematani matombo ematombo, 40,000 mativi metres egranite, mari yegore rose yemamiriyoni matatu emadhora.
Izvo zvigadzirwa zvinotengesa kuItaly, Germany, Canada, Japan uye pamusoro penyika makumi mashanu uye makuru epamba. Iine makore anopfuura makumi matatu ekushanda nesimba, Longshan rave iro rekugadzira ndiro. Vatengi vekunze vakafunga kuti itsika kutenga slate kubva kuChina, uye kuenda kuYixian, chete kweLongshan.
Muna 2000, Longshan yapfuura iyo ISO9001: 2000 yepasi rose mhando sisitimu yekusimbisa kutanga munzvimbo yeplate uye zvigadzirwa zvematombo kubva longshan zvakapfuura wechitatu-bato reHK ITS kuongorora. Longshan Dombo rinobudirira kukoka iyo Birds'Nest Nhandare yeBeijing Mitambo yeOlympic muna2008 uye yakapihwa zviuru gumi zvemamirimita ematare. Longshan ibwe rakawana kurumbidzwa kukuru kubva kune vatengi kumba uye kunze kwenyika kune zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye mukurumbira wakavimbika.
Iro dombo kubva kuLongshan rakashandiswa kubva padombo rekuisa iro rakaumbwa mabhiriyoni emakore apfuura. Hunhu hwayo hwekuomesa zvirokwazvo hwakatarisira kukwirira kwaro kukotama kwesimba, kumanikidza-kuramba, kupfeka-chiratidzo uye kurora-kuramba. Dombo reLongshan rinodaidzwa kuti rakasvibirira rekushongedza nekuda kwezasi rayo radioaction zvemukati ichienzanisa neyakaenzana mwero weiyo International Commissionon paRadiological Dziviriro. Izvo zvigadzirwa zvematombo zvine mavara akajeka uye akasarudzika marara zvitaera uye akasiyana masitayera, kunge mataira, howa ibwe, padenga ibwe, mambure peta, tsika dombo, mosaic, girenayiti zvichingodaro. Uye anoshandiswa muzvivakwa zveveruzhinji, dzimba dzekugara, mayadhi, mapindu uye zvimwe zvivakwa zvakawandisa, kuvhenekesa zvivakwa kuti zvive zvakanaka uye kuunza vanhu kunzvimbo yakasikwa, uyezve mhando yezvinhu zvemazuva ano zvakashongedzwa uye zvine fashoni.
Longshan ibwe rakagadzira uye rakagadzira hunyanzvi hutsva hweYizhou-Pretty Spring, MuChinese Meiquanshi ine makore anopfuura makumi maviri kunzwisisa nekutsvagisa. uye yakaremekedzwa 25 patent dzenyika. Rudzi urwu rweHumidifier-Chitubu runogona kudzora hunyoro mune hwakanyanya huremu hwemuviri wemunhu nemvura yayo yekudzokororazve, ichibuda semusikirwo, nebasa rekuomesa kuregererwa, kuwedzera kwemvura uye kuri kuchenesa. Iye zvino Longshan Stone yakaitangisa kumusika, uye yakahwina mukurumbira wakanaka kwazvo.
Mune ramangwana, Longshan Stone anogara achitevedzera musimboti we'kubata vanhu nekuvimbika, kushanda nesimba nemoyo, kutsvaga kwemhando yepamusoro uye kugona kwakanyanya, kwakavakirwa pachikwereti chakanaka 'uye kushandira pamwe nemoyo wese uye zvakazara nevatengi vekunze nekune dzimwe nyika.
Mune ramangwana, Longshan Stone anogara achitevedzera musimboti we'kubata vanhu nekuvimbika ...
Iye zvino Longshan Stone yakaitangisa kumusika, uye yakahwina mukurumbira wakanaka kwazvo.
Runhare:+ 86-15130218520, + 86-15544952267